I-China DP-32 ye-infrared Thermal Imaging Camera Ukuveliswa kunye neFektri | UDianyang
I-DP-32 isebenzisa amandla okubonelela nge-USB kwaye idlulisa idatha igqityiwe ngentambo enye ye-USB, iqaphela ukuthunyelwa okufanelekileyo nokukhawulezayo.
Ngokusekwe kwindawo yokuthunyelwa kwabaxumi, i-DP-32 inokuqhuba imbuyekezo yetempile ngokwahluka notshintsho lwendalo ngokuzithandela ngaphandle kokulinganiswa komntu omnyama kunye nokulawula impazamo kuluhlu lwe- ± 0.3 ° C (± 0.54 ° F).
Ikhamera yokujonga ubushushu inokulinganisa ngokuzenzekelayo umzimba womntu ngaphandle koqwalaselo, akunamsebenzi nokuba awunayo imbonakalo yobuso.
Abantu bahamba nje bengayeki, inkqubo iya kububona ubushushu bomzimba.
Ngomntu omnyama ukuba azilinganise ngokuzenzekelayo ikhamera yokucinga eshushu, ehambelana ngokupheleleyo nemfuno ye-FDA.
I-Ethernet kunye ne-HDMI port esekwe kwi-SDK; abathengi banokuvelisa iqonga lesoftware.
Ngokuzenzekelayo thatha abantu bajongane nemifanekiso kwaye urekhode iividiyo zealam xa ubushushu babantu buphezulu kunombundu.
Imifanekiso yealam kunye neevidiyo zinokugcinwa ngokuzenzekelayo kwidiski yangaphandle ye-USB.
Inkxaso ebonakalayo okanye yeendlela zokubonisa fusion.
Ukucaciswa kwe-DP-32 zezi zilandelayo:
Ukucatshulwa kwe-infrared thermal Isigqibo 320x240
Iqela lokuphendula 8-14um
I-NETD 70mK @ 25 ° C (77 ° F)
I-engile yentsimi 34.4 ngokuthe tye, 25.8 nkqo
Uluhlu lwemilinganiselo -10 ° C - 330 ° C (14 ° F-626 ° F)
Ukuchaneka kwemilinganiselo Umzimba womntu, ialgorithm yembuyekezo yethutyana inokufikelela ± 0.3 ° C (± 0.54 ° F)
Imilinganiselo Ukuqwalaselwa kobuso bomntu, imilinganiselo ngokubanzi.
Iphalethi yombala I-Whitehot, i-Rainbow, i-Iron, iTyrian.
Ngokubanzi Ujongano Ukunikezelwa kwamandla kunye nokuhanjiswa kwedatha nge-standard USB 2.0
Ixesha lokusebenza -20 ° C (-4 ° F) ~ + 60 ° C (+ 140 ° F) (kwimfuno yesilinganiselo esichanekileyo somlinganiso womzimba womntu, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe kwi-tempi ye-10 ° C (50 ° F) ~ 30 ° C (+ 86 ° C))
Ixesha lokugcina -40 ° C (-40 ° F) - + 85 ° C (+ 185 ° F)
Ubungakanani 129mm * 73mm * 61mm (L * W * H)
Ukusinda okushiyekile 295g
Ukugcina umfanekiso IJPG, PNG, BMP.
Ukufakwa ¼ ”Ukwamkelwa kathathu okusemgangathweni okanye ukuphakanyiswa kwepan-tilt, imingxunya emi-4 iyonke.
Isoftware Ukubonisa Temp Ukulandelwa kwesantya esiphezulu kwindawo yokulinganisa kungasetwa.
Isivusi Iyafumaneka nge-alamu ngaphezulu kweseti yomqobo ophakamileyo, inokukhala ngealam, iifoto zealarm kunye nokugcina kwangaxeshanye.
Imbuyekezo yeTemp Abasebenzisi banokuseta imbuyekezo yeqondo lobushushu ngokwemeko
Ifoto Ngesandla phantsi kokuvulwa, ngokuzenzekelayo phantsi koyikisayo
Ukulayishwa kwelifu kwi-Intanethi Elungiselelweyo ngokweemfuno ilifu
Inye kuphela intambo ye-USB efunekayo ukudibanisa umatshini wokucinga oshushu kunye nekhompyuter. Imowudi yoqhagamshelo kunye nemodeli yojongano ibonakalisiwe kulo mzobo ulandelayo
Kucetyiswa ukuqhuba inkqubo phantsi kweMicrosoft Windows 10 x64, ujongano lulandelayo:
Umfanekiso wexesha lokwenyani
Khetha ikhamera ebhokisini ebomvu kumzobo ongezantsi, cofa u "Dlala", kwaye umfanekiso wangoku wekhamera uza kuboniswa ngasekunene. Cofa u "Misa" ukuyeka ukubonisa umfanekiso wexesha lokwenyani. Cofa "Ifoto" ukukhetha "Ifolda" kwaye ugcine umfanekiso.
Cinezela i icon yokwandisa ephezulu ekunene komfanekiso, umfanekiso kunye nexabiso lobushushu elilinganisiweyo liya kwandiswa, kwaye ucinezele kwakhona uya kutshintshela kwimo yesiqhelo.
I-DP-32 infrared imager eshushu ibonelela ngeendlela ezimbini zomlinganiso wobushushu,
Ukuqwalaselwa kobuso bomntu
Imowudi yokulinganisa ngokubanzi
Abathengi banokutshintsha imo kulungelelwaniso lwe icon yekona esekunene yesoftware
Imowudi yokulinganisa okungagqibekanga kwesoftware kukuqondwa kobuso bomntu, xa isoftware ibuqonda ubuso bomntu, kuyakubakho uxande oluluhlaza kwaye ubonise ubushushu. Nceda unganxibi umnqwazi, iiglasi zokugquma ubuso.
Iiphalethi zombala onokukhetha kuzo zezi zilandelayo:
Iyafumaneka kwiialamu zemifanekiso kunye nealam zokuvakala, kunye nokugcina ngokuzenzekelayo umfanekiso okhawulezayo xa ialam zisenzeka.
Xa itempile ingaphezulu kombundu, indawo yokulinganisa ibhokisi iya kujika ibomvu ukunika ialam.
Cofa kwi-ellipsis elandela igama elithi "iAlarm yeLizwi" ukukhetha izandi ezahlukeneyo kunye nezikhewu zemveliso yesandi, kwaye ucofe kwi-ellipsis elandela igama elithi "Ifoto yeAlarm" ukukhetha isikhombisi kunye nexesha lokuphumla ngokuzenzekelayo.
Inkxaso yealam evakalayo ifayile yesandi, ngoku ixhasa kuphela i-PCM encoding WAV ifayile.
Ukuba i "Alarm Photo" ijongiwe, umfanekiso okhawulezayo uzakuboniswa ekunene kwesoftware kwaye ixesha lokujonga ngokukhawuleza lizakuboniswa. Cofa lo mfanekiso ukuze ujonge isoftware ka-Win10 emiselweyo.
Cinezela i-icon engaphezulu ekunene yokumisela, abasebenzisi banokumisela oku kungezantsi,
Ubushushu beyunithi: Celsius okanye Fahrenheit.
Indlela yokulinganisa: Ukuqondwa kobuso okanye imo ngokubanzi
Ubungqina bokumnyama: 0.95 okanye 0.98
Isatifikethi se-DP-32 CE sibonisiwe ngezantsi,
Isiqinisekiso seFCC siboniswe ngezantsi,
Egqithileyo Ikhamera yokucinga ye-infrared thermal ye-DR-23
Okulandelayo: Ibhodi yesekethe ye-CA10 ye-PCB yokuhlaziya okufudumeleyo